HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tsonga Xhosa Zoloa Éwé
ZAGREB, any Kroasia—Nisy oram-be nivatravatra tany amin’ireo tany Balkans, tamin’ny 13 ka hatramin’ny 15 Mey 2014. Nisy tondra-drano be, vokatr’izany, ary nisy tany nihotsaka 3000 teo ho eo. Io no tondra-drano nampidi-doza indrindra tany Bosnia-Herzegovina sy Kroasia ary Serbia hatramin’izay. Nanampy an’ireo tra-boina tany ny komitin’ny vonjy rano vaky eo anivon’ny Vavolombelon’i Jehovah, izay mpiasa an-tsitrapo daholo. Niaraka tamin’izy ireo koa ny solontenan’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Alemaina.
Nomen’ireo komity fitaovam-pitaterana, sakafo, akanjo, ary trano vonjimaika avy hatrany ireo tsy maintsy niala tamin’ny tranony. Tsy nisy Vavolombelon’i Jehovah maty na naratra, fa 14 kosa, fara fahakeliny, ny tranon’izy ireo rava tanteraka na simba be. Rava koa ny toeram-pivavahana iray an’ny Vavolombelon’i Jehovah. Ireo komitin’ny vonjy rano vaky ireo izao no manara-maso ny fanamboarana ny trano simba sy ny fanorenana trano tsotsotra ho an’ireo nanana trano rava.
Hoy i Josip Liović, mpitondra tenin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kroasia: “Maivamaivana erỳ izahay maheno hoe tsy nisy niharan-doza ny tao amin’ny fiangonanay, nefa miara-ory amin’ireo namoy havana aman-tsakaiza koa izahay. Manao ezaka manokana izahay hampaherezana ny olona manerana ireo tany Balkans. Faly koa izahay satria nampian’ny namanay avy any Alemaina handamina fanampiana tra-boina. Tena ilaina izany mandritra an’ireo herinandro sy volana ho avy.”